အာဏာသိမ်းဆန့် ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတခုအား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြိုခွဲစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AFP)
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းနိုင်ရေးမှာ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဦးဆောင်မှုပိုင်းက တာဝန်ပျက်ကွက်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် စစ်တပ်က ကျုးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေမှာ အလိုတူ အလိုပါ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ဗြိတိန် အခြေစိုက် NGO အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Accountability Project အဖွဲ့က မကြာသေးခင်က အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က ကျုးလွန်တဲ့ လူသားထုအပေါ် ကျုးလွန်တဲ့ရာဇ၀တ်မှုမျိုးတွေကို ကုလသမဂ္ဂက ဟန့်တားဖို့ ပျက်ကွက်နေတယ်ဆိုပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း ထင်ရှားတဲ့ BBC သတင်းထောက်တဦးဖြစ်ခဲ့သူ၊ လက်ရှိ Myanmar Accountability Project အဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာ Christopher Gunness က VOA ကို ပြောပါတယ်။ Christopher Gunness ကို မအိသန့်စင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
အိသန့်စင်။ ။ မင်္ဂလာပါ Mr. Christopher Gunness. Myanmar Accountability Project ကနေ မကြာခင်က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာအကြောင်းချုံငုံပြီးတော့ ပြောပြပါ။
Christopher Gunness: : အတော်ဆိုးရွားတဲ့အချက်တွေကို တွေ့ရှိကြောင်း ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ စနစ်၊ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာ ပျက်ကွက်မှုတွေ တွေ့ရပါတယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခအခြေအနေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အဆင့်အဆင့် ဦးဆောင်မှုပိုင်းမှာပါ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုပိုင်း အားနည်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ တာဝန်ချထားတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ပြဿနာမျိုးစုံရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်။ တချို့လူတွေဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ဖွံ့ဖြိုးရေးပိုင်းမှာ တာဝန်ကျတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်း မန္တလေးလို မြို့တွေက အခြေအနေတွေကို ၀င်ပြီး စွက်ဖက်လို့မရပါဘူးလို့ ပြောကြတယ်။
အိသန့်စင်။ ။ ဒီမှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ပြောပြပါ။
Christopher Gunness: : ကုလသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းကလူတွေ၊ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍက အကြီးအကဲတွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတောင် မရှိကြပါဘူး။ ဒါတင်မက ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်းတွေအများကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဟာ လူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုမှာ ကုလသမဂ္ဂက ကြံရာပါ ဖြစ်နေတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် ၂၀၁၇ တုန်းက ရိုဟင်ဂျာတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တုန်းကလည်း ဒီလိုပါပဲ။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်နေချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂ UN က လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ Gert Rosenthal (ဂတ် ရိုဆင်သော)ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားခဲ့တာပါ။ အခု Damian Lily ရေးတဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာမှာလည်း ကုလသမဂ္ဂဟာ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေမှာ ကြံရာပါဖြစ်နေတာကို အလားတူ တွေ့ရှိပါတယ်။
အိသန့်စင်။ ။ ကုလသမဂ္ဂက ဘာမှ မလုပ်ဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်က လူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေမှာ ကြံရာပါ ဖြစ်နေတယ်လို့ ခုနက ထည့်ပြောသွားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါလဲ။
Christopher Gunness: : ရေးသားသူ Damian Lily ရဲ့ အစီရင်ခံစာက ရှင်းပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာနဲ့ နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာ ဦးဆောင်မှုရှိရပါမယ်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးကအစ ရေရေရာရာ လုပ်တာ ဘာမှ မတွေ့ရပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို အရပ်သားတွေကို ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီး ရှိပါလျက်နဲ့ ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးရဲ့ အစီအစဉ်တွေ ရှိရဲ့သားနဲ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ တရက်နေ့စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရပ်သားပြည်သူတွေအပေါ် ကြောက်မက်ဖွယ် ဖိနှိပ်နေတာတွေကို နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ၀န်ထမ်း အယောက် ၂ ထောင်က ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ထောင်ထဲရောက်နေသူတွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ အထောက်အပံ့ လုံလုံလောက်လောက်မပေးနိုင်ဘူး။ ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကာကွယ်မှုလည်း ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူး။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာတောင် ကောင်းကောင်းမရေတွက်နိုင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့AAPP ရဲ့ စာရင်းအရ လူ ၉၀၀ နီးပါး သေဆုံးရပြီးဖြစ်တယ်။ လူတော်တော်များများက ခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ အပစ်ခံရလို့သေကြရတဲ့ လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ အယောက် ၅ထောင်လောက်က အဖမ်းခံနေရတာ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂက ဒီလူတွေကို လိုက်ရှာမသေးနိုင်သလို လူဘယ်နှယောက်လည်းဆိုတာ မရေတွက်နိုင်ပါဘူး။ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း လစ်ဟာမှုရဲ့ ရလာဒ်တွေပါ။ ဂျနီဗာမှာ ရှိတဲ့ UNHCR ဦးဆောင်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂကာကွယ်ပေးရေး အသိုက်အ၀န်းရဲ့ လုံးဝ ညံ့ဖျင်းမှုပါ။ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာကို ဖတ်ပြီး အကြံပြုချက်တွေအရ အမြန်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနိုိင်ဖို့ ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းရှိရပါမယ်။ ဌာနအချင်းချင်း ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ရပါမယ်။ ဒီပြဿနာတွေအားလုံး ဖြေရှင်းနိုင်မှ ဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ ပိုဆိုးလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ်လည်း မပြောကောင်းမဆိုကောင်း ဒီလို အဖြစ်မျိုး နောက်နိုင်ငံတခုမှာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် မတွေးဝံ့စရာပါ။ သမိုင်းက တကြောင်းပြန်လည်လာနိုင်ပါတယ်။
အိသန့်စင်။ ။ နောက်မေးခွန်းတခုကတော့ ၁၉၈၈ တော်လှန်ရေးနဲ့ အခု စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖြစ်ရပ် ၂ ခုကို ဘယ်လို နှိုင်းယှဉ်ပါသလဲ။
Christopher Gunness: : အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အဓိကကွာခြားတာကတော့ မန္တလေးလို မြို့တွေမှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသတ်ခံနေရတာကို Gen Z မျိုးဆက်သစ်တွေက ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားပြီး အွန်လိုင်းပေါ်တင်တော့ နိုင်ငံတ၀ှမ်းက လူတွေအားလုံး သိသွားပါတယ်။ အပြစ်မဲ့အရပ်သားပြည်သူတွေအများအပြား အသတ်ခံနေရတာကို နိုင်ငံတရာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ မြင်ပြီး ဒါကို ရပ်တန့်အောင် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နိုင်သွားတယ်။ ကျွန်တော် ဘီဘီစီမှာ ၁၉ ၈၈ တုန်းက သတင်းထောက်လုပ်တုန်းကဆိုရင် စက်တင်ဘာလ တတိယအပတ် မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ လူတွေအများကြီးအသတ်ခံရတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုလို့ကျွန်တော့်သတင်းပဲရှိတယ်။ တခြားသတင်းထောက်တွေရဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေရှိပေမယ့် လူမှုကွန်ယက်မရှိတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက သတင်းမြန်မြန် များများမရဘူး။ အခုတော့ ထိတ်လန့်စရာဓာတ်ပုံတွေက ချက်ချင်းဆိုသလို ပြန့်သွားပြီး ဒါတွေဟာ လူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ သက်သေမှတ်တမ်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
အိသန့်စင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Myanmar Accountability Project ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေအကြောင်း ပြောပြပါ။
Christopher Gunness: : ကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့ Myanmar Accountibility Project မှာ ဒီသက်သေအထောက်အထားတွေကို အထူးသဖြင့် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတမှု ရယူရာမှာ သုံးပါတယ်။ လန်ဒန်က သံအမတ်အိမ်ကို စစ်အစိုးရက မတရားလုယူလို့မရအောင် အခု ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက သက်သေအထောက်အထားတွေကို သုံးပြီး ဒီစစ်အစိုးရဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို အကြောက်တရားနဲ့ ကြီးစိုးနေတဲ့ တရားမ၀င်အစိုးရဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထောက်အထားတွေကို ယူသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူသုံးတာမရှိဘူးလို့ဒီအစီရင်ခံစာအရ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီသက်သေအထောက်အထားတွေကိုသုံးပြီး မြန်မာကို လက်နက်ရောင်းနေတဲ့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင် က ရုရှားသွားပြီး လက်နက်ဝယ်နေလို့ပါ။ မြန်မာစစ်အစိုးရကို လက်နက်ရောင်းချင်လို့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ တရုတ်နဲ့ ရုရှားက မြန်မာစစ်တပ်ကို ကာကွယ်ပြောပေးနေတာပါ။ တရုတ်နဲ့ ရုရှားက မြန်မာကို လက်နက်ရောင်းနေတာကို ဖုံးကွယ်လို့မရအောင် သက်သေနဲ့တကွ ပြရပါမယ်။ သက်သေအထောက်အထားတွေစုပြီး နိုင်ငံရေးအင်အားစုဖြစ်တည်နိုင်ရင် သက်ရောက်မှုကြီးတွေ့နိုင်မှာပါ။
အိသန့်စင်။ ။ ကျေးဇူးပါ Mr. Gunness. ဒီအစီရင်ခံစာရဲ့ သက်ရောက်မှုကို စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
Christopher Gunness: : အခုလို အချိန်ပေး မေးမြန်းတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မွနျမာနိုငျငံရေးအကွပျအတညျးဖွရှေငျးဖို့ ကုလပကျြကှကျဟု အစီရငျခံစာတစောငျဖျောပွ
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စဈအာဏာသိမျးမှုနဲ့ နိုငျငံရေးအကပျြအတညျး ဖွရှေငျးနိုငျရေးမှာ ကုလသမဂ်ဂ အဖှဲ့ကွီးရဲ့ အဆငျ့ဆငျ့ ဦးဆောငျမှုပိုငျးက တာဝနျပကျြကှကျမှုတှေ ရှိနတောကွောငျ့ စဈတပျက ကြုးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှမှော အလိုတူ အလိုပါ သဘောမြိုး ဖွဈနတေယျဆိုပွီး ဗွိတိနျ အခွစေိုကျ NGO အဖှဲ့တခုဖွဈတဲ့ Myanmar Accountability Project အဖှဲ့က မကွာသေးခငျက အစီရငျခံစာမှာ ဖျေါပွထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက ကြုးလှနျတဲ့ လူသားထုအပျေါ ကြုးလှနျတဲ့ရာဇဝတျမှုမြိုးတှကေို ကုလသမဂ်ဂက ဟနျ့တားဖို့ ပကျြကှကျနတေယျဆိုပွီး ၁၉၈၈ ခုနှဈ မွနျမာပွညျ ဒီမိုကရစေီရေးလှုပျရှားမှုကာလအတှငျး ထငျရှားတဲ့ BBC သတငျးထောကျတဦးဖွဈခဲ့သူ၊ လကျရှိ Myanmar Accountability Project အဖှဲ့ရဲ့ ဒါရိုကျတာ Christopher Gunness က VOA ကို ပွောပါတယျ။ Christopher Gunness ကို မအိသနျ့စငျ ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
အိသနျ့စငျ။ ။ မင်ျဂလာပါ Mr. Christopher Gunness. Myanmar Accountability Project ကနေ မကွာခငျက ထုတျပွနျလိုကျတဲ့ ဒီအစီရငျခံစာအကွောငျးခြုံငုံပွီးတော့ ပွောပွပါ။
Christopher Gunness: : အတျောဆိုးရှားတဲ့အခကျြတှကေို တှရှေိ့ကွောငျး ဒီအစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ စနဈ၊ဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ခေါငျးဆောငျမှုပိုငျးမှာ ပကျြကှကျမှုတှေ တှရေ့ပါတယျ။ အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး မွနျမာနိုငျငံပဋိပက်ခအခွအေနကေို ကိုငျတှယျရာမှာ အဆငျ့အဆငျ့ ဦးဆောငျမှုပိုငျးမှာပါ လိုအပျခကျြတှေ ရှိနတောကို တှရေ့တယျ။ ခြိတျဆကျလုပျဆောငျမှုပိုငျး အားနညျးနတော တှရေ့တယျ။ တာဝနျခထြားတဲ့နရောတှမှောလညျး ပွဿနာမြိုးစုံရှိနတောကို တှရေ့တယျ။ တခြို့လူတှဆေိုရငျ ကြှနျတျောတို့က ဖှံ့ဖွိုးရေးပိုငျးမှာ တာဝနျကတြဲ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံတဝှမျး မန်တလေးလို မွို့တှကေ အခွအေနတှေကေို ဝငျပွီး စှကျဖကျလို့မရပါဘူးလို့ ပွောကွတယျ။
အိသနျ့စငျ။ ။ ဒီမှာ ကုလသမဂ်ဂရဲ့အခနျးကဏ်ဍကို ပွောပွပါ။
Christopher Gunness: : ကုလသမဂ်ဂခေါငျးဆောငျမှုပိုငျးကလူတှေ၊ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာကဏ်ဍက အကွီးအကဲတှကေ မွနျမာနိုငျငံထဲမှာတောငျ မရှိကွပါဘူး။ ဒါတငျမက ကုလသမဂ်ဂဝနျထမျးတှအေမြားကွီးကို မွနျမာနိုငျငံက ထှကျခှာဖို့ အမိနျ့ပေးခဲ့တယျ။ ဒါဟာ လူသားထုအပျေါကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုမှာ ကုလသမဂ်ဂက ကွံရာပါ ဖွဈနတောပါ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈ ၂၀၁၇ တုနျးက ရိုဟငျဂြာတှကေို အစုလိုကျအပွုံလိုကျ သတျဖွတျခဲ့တုနျးကလညျး ဒီလိုပါပဲ။ လူမြိုးတုနျးသတျဖွတျမှုဖွဈနခြေိနျမှာ ကုလသမဂ်ဂ UN က လကျပိုကျကွညျ့နတေယျလို့ Gert Rosenthal (ဂတျ ရိုဆငျသော)ရဲ့ ကြျောကွားတဲ့ အစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွထားခဲ့တာပါ။ အခု Damian Lily ရေးတဲ့ ဒီအစီရငျခံစာမှာလညျး ကုလသမဂ်ဂဟာ လူသားထုအပျေါ ကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှမှော ကွံရာပါဖွဈနတောကို အလားတူ တှရှေိ့ပါတယျ။
အိသနျ့စငျ။ ။ ကုလသမဂ်ဂက ဘာမှ မလုပျဘဲ လကျပိုကျကွညျ့နတေယျ၊ ကုလသမဂ်ဂကိုယျတိုငျက လူသားထုအပျေါကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှမှော ကွံရာပါ ဖွဈနတေယျလို့ ခုနက ထညျ့ပွောသှားပါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂအနနေဲ့ ဘယျလို လုပျဆောငျဖို့ အကွံပွုခငျြပါလဲ။
Christopher Gunness: : ရေးသားသူ Damian Lily ရဲ့ အစီရငျခံစာက ရှငျးပါတယျ။ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာနဲ့ နိုငျငံရေးပိုငျးမှာ ဦးဆောငျမှုရှိရပါမယျ။ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးကအစ ရရေရောရာ လုပျတာ ဘာမှ မတှရေ့ပါဘူး။ လိုအပျတဲ့ ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာမဆို အရပျသားတှကေို ကာကှယျရမယျဆိုတဲ့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ရညျရှယျခကျြကွီး ရှိပါလကျြနဲ့ ၊ လူ့အခှငျ့အရေးကို ကာကှယျဖို့ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှူးခြုပျရုံးရဲ့ အစီအစဉျတှေ ရှိရဲ့သားနဲ့၊ ဖဖေျောဝါရီလ တရကျနစေ့ဈတပျက အာဏာသိမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ အရပျသားပွညျသူတှအေပျေါ ကွောကျမကျဖှယျ ဖိနှိပျနတောတှကေို နိုငျငံထဲမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ်ဂဝနျထမျး အယောကျ ၂ ထောငျက ဘာမှ မလုပျပေးနိုငျပါဘူး။ ထောငျထဲရောကျနသေူတှကေို ဥပဒကွေောငျးအရ အထောကျအပံ့ လုံလုံလောကျလောကျမပေးနိုငျဘူး။ ရုပျပိုငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ထောကျပံ့ကာကှယျမှုလညျး ကောငျးကောငျးမပေးနိုငျဘူး။ ပြောကျဆုံးနတေဲ့သူတှေ ဘယျနှယောကျရှိလဲဆိုတာတောငျ ကောငျးကောငျးမရတှေကျနိုငျဘူး။ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြား ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရေးအဖှဲ့AAPP ရဲ့ စာရငျးအရ လူ ၉၀၀ နီးပါး သဆေုံးရပွီးဖွဈတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက ခေါငျးကို သနေတျနဲ့ အပဈခံရလို့သကွေရတဲ့ လကျနကျမဲ့ ဆန်ဒပွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ လူ အယောကျ ၅ထောငျလောကျက အဖမျးခံနရေတာ ဒါမှမဟုတျလညျး ဘယျရောကျနမှေနျးမသိ ပြောကျဆုံးနပေါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂက ဒီလူတှကေို လိုကျရှာမသေးနိုငျသလို လူဘယျနှယောကျလညျးဆိုတာ မရတှေကျနိုငျပါဘူး။ ကုလအတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ ခေါငျးဆောငျမှုပိုငျး လဈဟာမှုရဲ့ ရလာဒျတှပေါ။ ဂနြီဗာမှာ ရှိတဲ့ UNHCR ဦးဆောငျတဲ့ ကုလသမဂ်ဂကာကှယျပေးရေး အသိုကျအဝနျးရဲ့ လုံးဝ ညံ့ဖငျြးမှုပါ။ ကုလသမဂ်ဂအနနေဲ့ ဒီအစီရငျခံစာကို ဖတျပွီး အကွံပွုခကျြတှအေရ အမွနျပွောငျးလဲပွငျဆငျလုပျဆောငျဖို့ အခြိနျတနျပါပွီ။ လူသားခငျြးစာနာမှုအကူအညီပေးနိုငျဖို့ ခေါငျးဆောငျမှုကောငျးရှိရပါမယျ။ ဌာနအခငျြးခငျြး ပူးပေါငျးလုပျကိုငျရပါမယျ။ ဒီပွဿနာတှအေားလုံး ဖွရှေငျးနိုငျမှ ဖွဈမှာပါ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခွအေနေ ပိုဆိုးလာတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတျလညျး မပွောကောငျးမဆိုကောငျး ဒီလို အဖွဈမြိုး နောကျနိုငျငံတခုမှာ ဖွဈမယျဆိုရငျ မတှေးဝံ့စရာပါ။ သမိုငျးက တကွောငျးပွနျလညျလာနိုငျပါတယျ။
အိသနျ့စငျ။ ။ နောကျမေးခှနျးတခုကတော့ ၁၉၈၈ တျောလှနျရေးနဲ့ အခု စဈအာဏာသိမျးတဲ့ဖွဈရပျ ၂ ခုကို ဘယျလို နှိုငျးယှဉျပါသလဲ။
Christopher Gunness: : အတျောစိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ မေးခှနျးပါ။ အဓိကကှာခွားတာကတော့ မန်တလေးလို မွို့တှမှော အစုလိုကျအပွုံလိုကျအသတျခံနရေတာကို Gen Z မြိုးဆကျသဈတှကေ ဓာတျပုံတှရေိုကျထားပွီး အှနျလိုငျးပျေါတငျတော့ နိုငျငံတဝှမျးက လူတှအေားလုံး သိသှားပါတယျ။ အပွဈမဲ့အရပျသားပွညျသူတှအေမြားအပွား အသတျခံနရေတာကို နိုငျငံတရာနိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျတှေ မွငျပွီး ဒါကို ရပျတနျ့အောငျ လုပျစရာရှိတာ လုပျနိုငျသှားတယျ။ ကြှနျတျော ဘီဘီစီမှာ ၁၉ ၈၈ တုနျးက သတငျးထောကျလုပျတုနျးကဆိုရငျ စကျတငျဘာလ တတိယအပတျ မွို့တျောခနျးမရှမှေ့ာ လူတှအေမြားကွီးအသတျခံရတဲ့ မှတျတမျးဆိုလို့ကြှနျတေျာ့သတငျးပဲရှိတယျ။ တခွားသတငျးထောကျတှရေဲ့ သတငျးဆောငျးပါးတှရှေိပမေယျ့ လူမှုကှနျယကျမရှိတော့ ပွညျပနိုငျငံတှကေ သတငျးမွနျမွနျ မြားမြားမရဘူး။ အခုတော့ ထိတျလနျ့စရာဓာတျပုံတှကေ ခကျြခငျြးဆိုသလို ပွနျ့သှားပွီး ဒါတှဟော လူသားထုအပျေါကြူးလှနျတဲ့ ရာဇဝတျမှုတှေ သကျသမှေတျတမျး ဖွဈသှားပါတယျ။
အိသနျ့စငျ။ ။ ဟုတျကဲ့ပါ။ Myanmar Accountability Project ရဲ့ လုပျဆောငျမှုတှအေကွောငျး ပွောပွပါ။
Christopher Gunness: : ကြှနျတျောဦးဆောငျတဲ့ Myanmar Accountibility Project မှာ ဒီသကျသအေထောကျအထားတှကေို အထူးသဖွငျ့ ညှငျးပနျးနှိပျစကျခံရမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး တရားမြှတမှု ရယူရာမှာ သုံးပါတယျ။ လနျဒနျက သံအမတျအိမျကို စဈအစိုးရက မတရားလုယူလို့မရအောငျ အခု ကြှနျတျောတို့ လုပျနပေါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံထဲက သကျသအေထောကျအထားတှကေို သုံးပွီး ဒီစဈအစိုးရဟာ ကိုယျ့နိုငျငံသားတှကေို အကွောကျတရားနဲ့ ကွီးစိုးနတေဲ့ တရားမဝငျအစိုးရဖွဈကွောငျး ဖျောထုတျနပေါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂအနနေဲ့ကြှနျတျောတို့ရဲ့အထောကျအထားတှကေို ယူသုံးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယူသုံးတာမရှိဘူးလို့ဒီအစီရငျခံစာအရ တှရေ့ပါတယျ။ ဒီသကျသအေထောကျအထားတှကေိုသုံးပွီး မွနျမာကို လကျနကျရောငျးနတေဲ့ တရုတျနဲ့ ရုရှားတို့နဲ့ ညှိနှိုငျးနိုငျပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ မငျးအောငျလှိုငျ က ရုရှားသှားပွီး လကျနကျဝယျနလေို့ပါ။ မွနျမာစဈအစိုးရကို လကျနကျရောငျးခငျြလို့ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီမှာ တရုတျနဲ့ ရုရှားက မွနျမာစဈတပျကို ကာကှယျပွောပေးနတောပါ။ တရုတျနဲ့ ရုရှားက မွနျမာကို လကျနကျရောငျးနတောကို ဖုံးကှယျလို့မရအောငျ သကျသနေဲ့တကှ ပွရပါမယျ။ သကျသအေထောကျအထားတှစေုပွီး နိုငျငံရေးအငျအားစုဖွဈတညျနိုငျရငျ သကျရောကျမှုကွီးတှနေို့ငျမှာပါ။
အိသနျ့စငျ။ ။ ကြေးဇူးပါ Mr. Gunness. ဒီအစီရငျခံစာရဲ့ သကျရောကျမှုကို စောငျ့ကွညျ့နပေါတယျ။
Christopher Gunness: : အခုလို အခြိနျပေး မေးမွနျးတဲ့အတှကျလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျခငျဗြာ။